Venom: Let There Be Carnage (2021) – Burmese Subtitle
ကဲ အခုတစ်ခါမှာတော့ပုရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဇာတ်ကားအကြီးကြီးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ
အားလုံးလည်းစောင့်မျော်နေကြမယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လို spider man ကားကတည်း Venom ကိုနှစ်သက်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဒီ Venom Let there be Carnage ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို လည်ပင်းရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေကြမယ်ဆိုတာ တပ်အပ်ပြောရဲပါတယ်
IMDB 6.5 ရထားပြီး မိနစ် 90 လောက်ထိ run ထားတဲ့ ဒီ Venom ဆိုတဲ့ Sony ကထုတ်တဲ့ဇာတ်ကားဟာ ဘရားသားတို့အတွက်တော့အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး
. VENOM ဟာစတင်ထွက်ရှိပြီးကတည်းကအောင် မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက်ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကာလည်းဖြစ်ပါတယ်. WE ARE VENOM ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားရတာနဲ့တင် ကြက်သီးထသွားနိုင်သလိုမျိုး ဒီ VENOM2မှာလည်း ဘယ်လိုဇာတ်ကွက်တွေ ချပြသွားမလဲဆိုတာက တော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ
Sony ရဲ့ ချဲ့ထွင်လာတဲ့ တီဗီဖန်သားပြင် တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ 2018 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Venom smash hit က အအောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် . ဘယ်လို ပဲ solo movie တွေထွက်လာတယ်ပြောပြော Venom ဆိုတာကတော့ spiderman နဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိနေတာအမှန်ပါပဲ .
ဘ၀ကိုရေဆုန်မျောနေတဲ့ အီဒီ ဘရွတ်နဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော် VENOM တို့ဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်း ဘ၀ကိုအဆုံးသတ်ရတော့မယ် လူသတ်သမားကို ​ရှင်းလင်းထားတဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ. ပုရိတ်သတ်တွေကို super hero movies တွေ အတိုင်းပဲ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ duo Venom လုပ်ရှားမှုတွေကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေနဲ့ တင်ဆက်ပြထားပေးတဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ပုရိတ်သတ်တွေအတွက်စတူဒီယို ဘက်ဂျက်ကို ဘယ်လောက်ကုန်ကျခွရိုက်ကူးထားလည်းဆိုတာကိုလည်း ခန့်မှန်းနိုင်လောက်တဲ့ထိကို အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ရိုက်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နောက်ထပ်ထူးခြားတာက အီဒစ် နဲ့ Venom တို့နစ်ဥိးသား ဘယ်လို ခင်မင်ရင်း နှီးမှုကို ရှာဖွေကြမလဲ ဆိုတာရယ် စိတ်ကောက်တဲ့ Venom ရယ် ကို ဟာသပုံစံလေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ.
မှေးမိန်နေတဲ့ သူတို့ ဂျာနယ်တိုက်ကို ပြန်လည်အရောင်ထွက်အောင်မွန်းမံဖို့ကြိုးစားနေရင်း လူသတ်သမား အရှုပ်တော်ပုံတွေကြားထဲရောက်သွားတဲ့ အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် . ဒီမှာတွေ့ရတာတော့ Venom 1 မှာကတည်းက သူတို့တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့စည်းမျဉ်းလေးတွေကိုနည်းနည်း ပြန်ပါလာတာပါ .
လူမစားရ ဆိုတဲ့ ဟာလေးက အသက်ပေါ့
. Venom ဆိုတာထုံးစံအတိုင်း အမြဲစားသောက်ချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်း အငြင်းပွားကြမယ်ဆိုတာလည်း ရီစရာလေးနဲ့ရောပြီးကြည့်ရမှာ အမှန်ပါပဲ . နောက်ထပ် ကတော့ VENOM ဟာ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းလွန်ပြီးတော့ မှတ်သားမှုနဲ့ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်က အရမ်းထက်မြက်တယ်ဆိုတာ သိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်.
ဒီလိုမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့ CGI တွေမိုက်လွန်းတဲ့ မငြီးငွေ့စရာကောင်းပြီးကွဲထွက်နေတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ VENOM2က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်တွေရယ်က ဒီ ဇာတ်ကားကို တစ်ဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးကြွလာစေပါတယ် .
တစ်ခြားSUPER HERO ကားတွေကတော့ လုံး၀ ACTION တွေ ကိုအသားပေးထားပေမယ့်လည်း ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပျော်စရာအချိန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေးဆပ်ထားတာပါ . အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ တွဲဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ hero တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်သလို လူတွေချည်လိုက်စားနေရတဲ့ hero မဟုတ်တဲ့ ဒီ VENOM character ဟာ အခုလည်း နောက်ထပ်ပုရိတ်သတ်ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်ဖို့အတွက် ရောက်ရှိလို့လာပြန်ပါပြီ .
အားလုံးကို ချုံငုံပြီးပြောရရင်တော့ တစ်ခွန်းတည်းပဲ ပြောစရာရှိတော့မှာပါ ဒါကတော့ WE ARE VENOM ဆိုတာပါပဲ .
ဒီကားလေးကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Warly နဲ့ Hnin Moe ပဲဖြစ်ပါတယ်
IMDb Rating 6.3 71,535 votes
TMDb Rating 6.9 2,212 votes
Video Sources 4831 Views Report Error
Download GDrive 720p 758.8 MB
Download OneDrive 720p 758.8 MB
Download Mega 720p 758.8 MB
Download Mediafire 720p 758.8 MB
Download TeraBox 720p 758.8 MB
Download GDrive 1080p 2.36 GB
Download OneDrive 1080p 2.36 GB
Download Mega 1080p 2.36 GB
Download Mediafire 1080p 2.36 GB
Download TeraBox 1080p 2.36 GB
Download GDrive 4K HDR 3.44 GB
Download OneDrive 4K HDR 3.44 GB
Download Mega 4K HDR 3.44 GB
Download Mediafire 4K HDR 3.44 GB
Download TeraBox 4K HDR 3.44 GB